Fitsidihan'ny Ray Masina - Hafaliana nahita ny Papa - L'Hebdo de Madagascar
Sambany teo amin’ny fiainan’i Botolava Nemesse Darry sy Rasoaniavina Claire no nahita mivantana sy akaiky ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa, nandritra ny fitsidihany teto Madagasikara. Fony fahakeliny no niakatra farany teto andrenivohitra izy ireo. Mitantara ny zava-niainany sy ny hafaliany ary ny zava-baovao hitan’ny masony ny mpizaika.
N y alarobia 4 septambra tolakandro no tonga teto an-drenivohitra, Botolava Nemesse Darry, filohan’ny tanora kristiana ao amin’ny fiangonana katolika ao Vondrozo Karianga, diosezin’i Farafangana sy Rasoaniavina Claire, mpivavaka ao amin’ny fiangonana katolika Paroasy katedraly Fo Masin’i Jesoa ao Farafangana, izay niray dia tamin’ny fiara iombonana.
Tompona orinasa madinika fanamboarana fiarakodia sy moto simba, Botolava Nemesse Darry, raim-pianakaviana avy Vondrozo. Nakatona ny toeram-piasana nandritra ny andro vitsivitsy. « Tsy moramora raha hitady fiadanana sy fanantenana izany eo amin’ny fiainana. Zava-poana raha resaka vola tsy niditra nandritran’ny fandehanana taty Antananarivo fa ny nahazoana aim-panahy be no voalohan-daharana indrindra. Fotoan-dehibe tsy manam-paharoa izao fandalovan’ny Papa Fransoa izao ka tokony hararaotina », hoy Botolava Nemesse Darry, mitanisa ny tombontsoa lehibe azony tamin’izao fitsidihana apostolika nataon’ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa izao teto amintsika izao.
Nalamina sy narindra ny fiainan-tokantranondRasoaniavina Claire, renim-pianakaviana, avy ao amin’ny paroasy katedraly Fo Masin’i Jesoa ao Farafangana, raha namonjy ny zaika be tamin’ny fivahinian’ny Papa Fransoa, teto Madagasikara. « Fotoana elaela ihany no efa nanangonana vola natao saran-dalana. Amin’ny maha-renim-pianakaviana, tsy moramora izany mandao ny tokantrano ao anatin’ny andro vitsivitsy kanefa noho ny tombony azo tamin’ny aim-panahy vaovao azo sy nahita ny Ray Masina mivantana dia tsy mampaninona ny nandehanana taty. Tsy nilaina akory ny nandeha tany Vatican fa tombony ho antsika ny fandalovany taty ary porofo fa zavapoana avokoa ny zavadrehetra ety ambonin’ny tany raha ny zavatra nampianarin’ny Papa Fransoa », hoy Rasoaniavina Claire, mitsikitsiky fa nahazo hery ny finoany an’Andriamanitra.
Tombony lehibe ny fifanetrahan-tava teo amin’ny mpizaika sy ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa teto Madagasikara. « Nahazo aimpanahy be mihitsy ny tenako. Hita fa olom-boahositra ny Ray Masina ary tombony ho antsika ny fandalovany. Mino aho fa hisy fiadanana ary fanantenana amin’ny fiovan-javatra tamin’ny vavaka sy tso-drano nataony. Mila mifankatia isika Malagasy dia hilamina ho azy ny zava-drehetra. Tokony hisy akony eo amin’ny fiainan’ny tsirairay sy ny firenena ny fandalovan’ny Papa Fransoa fa tsy ho very anjavony fotsiny », hoy Botolava Nemesse Darry, manantena ny ho avin’ny fiainam-panahy ny mpino kristianina sy ny firenena.
Tamin’ny fahitalavitra no nahitana ny Papa Fransoa, hatramin’izay. Nahita mivantana sy nifanerasera tao anatin’ny andro vitsivitsy ny Malagasy sy ny vahiny nandray anjara tamin’ny fihaonana. « Nisy fifanatonana bebe kokoa teo amin’ny samy mpino kristianina ny fandalovan’ny Papa Fransoa. Zary lasa toy ny mpiray tampo na samy hafa fiaviana ny Malagasy rehetra ankoatran’ny aim-panahy azo », hoy Rasoaniavina Claire, mandinika ny tombontsoa azo tamin’ny fandalovan’ny Papa Fransoa.
Avy amin’ny lafivalon’ny Nosy no tonga nandray anjara tamin’ny fitsidihana apostolika nataon’ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa eto Madagasikara. Fony fahazaza, Botolava Nemesse Darry no nentin’ny ray aman-dreniny farany teto Antananarivo. Mbola zaza tamin’ny fandalovan’ny Papa Jean Paul II, teto Madagasikara, ny lehilahy ka tsy afaka nandeha tamin’ny fanarahana ny lamesa notarihan’ny Ray Masina, tamin’izany fotoana. « Tsy mbola vory saina no nahita an’Antananarivo, tamin’ny mbola kely. Tonga amin’ilay fiteny hoe : tanavo vao niakatra. Toy ireny mpitsidika vahiny ireny ny tenako amin’izao fotoana. Nikikitra kely mihitsy amin’ny ho enti-manana tamin’ny fandaniana rehetra… Ankoatran’ny aim-panahy, nahita zavabaovao maro raha mitaha ny any Vondrozo. Manararaotra mividy zavatra ho entina hanampiana ny fitaovana ao amin’ny orinasako ihany koa aho. Tsy ho vita ny hiakatra sy hidina aty Antananarivo noho ny halaviran’ny toerana. Tsy manana olana ny olona aty andrenivohitra raha mitaha aminay any ambany ravinkazo. Adin’ny efatra isan’andro no mandeha ny herinaratra. Miteraka tsy fahandriam-pahalemana ny aizina. Tsy misy fialam-boly hany ka mirona any amin’ny fifohana zava-mahadomelina ny tanora. Mbola lavitra aminay any ny hitovy tantana amin’ny aty an-drenivohitra », hoy Botolava Nemesse Darry, mitsiriritra ny filaminana sy ny faripiainan’ny olona ety andrenivohitra.
Nifindra monina tany Farafangana ny ray amandrenin-dRasoaniavina Claire noho ny asa amandraharaha amin’ny maha mpiasam-panjakana, fony izy kilasy faharoa ny tenany. « Tsy nisy tadidiko ny zavatra niainana tamin’izany fa mbola kidaladala ny tenako. Sambany indray izao vao niakatra ny renivohitra. Tsy nahasahy nandeha irery fa niaraka amin’ny besinimaro foana isaky ny mivoaka ny toerana nilasiana. Miainga eto Tsaramasay dia any amin’ny toerana misy ny fandalovan’ny Papa Fransoa. Hafa ihany izany miaina aty an-drenivohitra », hoy Rasoaniavina Claire.
Teo ampamaranana ny dinika, samy nanolotra fisaorana ny fitondrampanjakana sy ny mpitondra fivavahana katolika na Botolava Nemesse Darry na Rasoaniavina Claire, ny tamin’ny fanasana amin’ny fitsidihana apostolika nataon’ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa teto Madagasikara. Na nisy aza ny indro kely tamin’ny vovoka nisy teny Soamandrakizay. Ny tokony hijerena ny hampitovy tantana ny fiainana aty an-drenivohitra sy ny any ambany ravinkazo, hoy hatrany izy ireo amin’ny tokony na ny hahazoana jiro sy ny rano fotsiny ihany aza.